Blackmagic Design မှ Teranex Update 3.1 ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်း Teranex Update ကို 3.1 ကြေညာ
Teranex Express ကိုအပေါ် 12p3 မှတက်ကို Quad 2160G-SDI စကားဝိုင်းများအားလုံး Teranex အင်္ဂါရပ်များဗဟိုမှထိန်းချုပ်ပေါင်းအသစ်များကို 60G-SDI အပါအဝင် Teranex စံချိန်စံညွှန်းများ converters အဖြစ်ဘို့ဗိုလ်မှူးအသစ်က software ကို!
Blackmagic ဒီဇိုင်း ယင်း၏ Teranex 2D, 3D နှင့် Express ကို converters များအတွက်အဓိက update ကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Teranex 3.1 update ကိုအသစ်တခု software ကိုဖောက်သည်ကိုအဝေးမှကို set up နှင့်အလယ်ပိုင်းတည်နေရာမှမိမိတို့ Teranex converters အပေါ် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်လျှောက်လွှာအဖြစ်ကို Quad အသစ်တစ်ခု 12G-SDI ထည့်သွင်းဖြည့်စွက် HDTeranex Express ကိုမှ -SDI ဘာသာပြောင်း။
Teranex 3.1 update ကိုမှတာဝန်ခံကိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည် Blackmagic ဒီဇိုင်းက်ဘ်ဆိုက်.
Teranex 3.1 update ကို Teranex Setup ကိုခေါ်တော်မူသစ်တစ်ခုဗဟိုထိန်းချုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲ application ပါဝင်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးနဲ့ Mac OS X နဲ့ Windows ကွန်ပျူတာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, Teranex Setup ကိုဖောက်သည်ကိုအဝေးမှ setup ကိုပေးနိုင်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ Teranex 2D, 3D နှင့် Express ကို converters အဖြစ်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ software ကိုအလိုအလျှောက်ကွန်ရက်ပေါ်တွင် Teranex converters အဖြစ်ရှာဖွေပြီးတော့ device အတွက်အားလုံး features တွေထိန်းချုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။ Teranex Setup ကိုလွယ်ကူဖောက်သည်အရင်းအမြစ်နှင့် output ကိုရွေးချယ်ခြင်း, proc amp, အရောင်ဆုံးမခြင်း, အချိုး, အသံမြေပုံနှင့်ပိုပြီးတူလူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂါရပ်များအားလုံးဝင်ရောက်ဖို့စေသည်တစ်ခုအလိုလိုသိနှင့်လှပသောဒီဇိုင်း user interface ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလုပ်ချိန်ညှိမှုများဖောက်သည်သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကို feeds တွေကိုရန်ယင်ကောင်ချိန်ညှိပေါ်စေနိုင်စွမ်းပေးခြင်း, Teranex အပေါ်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားကြသည်။
Teranex Setup ကိုသေးငယ်တဲ့ post ကိုအိမ်များနှင့်ကြီးမားသောထုတ်လွှင့်ဖောက်သည်များနှစ်ခုလုံးအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးကြီးများကွန်ယက်ပေါ်တွင်မျိုးစုံ converters များကိုထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စုရုံးဖို့အသုံးပွုနိုငျစဉ်သေးငယ်အဆောက်အဦ, မျိုးစုံအသုံးပြုသူများနှင့်တစ်ဦး converter ကိုဝေမျှဖို့ကသုံးနိုင်သည်။ အသစ် Teranex Setup ကို software ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဒီနေ့ရဲ့ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ high resolution ကတော့ "Retina" display တွေအဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများထောက်ခံပါတယ်။
Teranex 3.1 update ကိုလည်း Teranex Express ကိုဖောက်သည်ယခု Teranex Express ကိုတစ်ဦး 12G-SDI convert လို့ရပါတယ်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့ frame rate ကို 12G-SDI ဆက်သွယ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အသစ်များကိုပြောင်းလဲ features တွေပေးသည် က Ultra HD Quad Link ကို 3G-SDI ဗီဒီယိုကသို့ကဗီဒီယို feed ကို။ ဤသည်ကို Quad Link ကို 3G-SDI မဆိုအပေါ်ကိုအသုံးပြုသည် က Ultra HD ရှိရာစောင့်ကြည့် က Ultra HD image ကို4၏ဖန်ဆင်းထားသည်တစ်ရပ်အဖြစ်မော်နီတာထဲမှာ recombined ဖြစ်ကြောင်း 1080HD SDI resolution ကိုဗီဒီယိုက "ကြွပ်" x က Ultra HD ပုံရိပ်။ ဗီဒီယိုကမြို့ရိုးကိုဖန်တီးသောအခါယင်းကို Quad Link ကို 3G-SDI feeds တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းသီးခြားလွတ်လပ်သည့်မော်နီတာထံသို့စေလွှတ်နိုင် က Ultra HD လေး 1080HD resolution ကိုမော်နီတာကနေ display တွေ။
အဆိုပါ update ကိုအထောက်အကူ က Ultra HD 23.98fps ထံမှ 60fps အထိဘောင်နှုန်းထားများ။ ဒါက Teranex Express ကိုယခု output ပြအသုံးပွုနိုငျခွငျးကိုဆိုလိုသ က Ultra HD ဗီဒီယိုကမြို့ရိုး, ကြီးမားသည့် LED ဖန်သားပြင်နှင့်အထက် 3G-SDI ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင် display ကိုကိရိယာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ဒီ update ကို 30 နှင့် 60fps ဖြည့်စွက်သောကြောင့် က Ultra HD Teranex Express ကိုမှထောက်ခံမှု, ဖောက်သည်များယခုစကားပြောကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကို 227 အထိတစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိသည်။
"သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုကို formats နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကြားပြောင်းလဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသိသောကြောင့်လူငယ်ကဏ္ဍနာမတော်ဖြင့် Teranex အရည်အသွေးကိုတောင်း," Grant ကအသေးသုံးငွေ, CEO ဖြစ်သူကလည်း, Blackmagic ဒီဇိုင်း။ "အသစ် Teranex Setup ကို software ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးစက်ရုံသို့မဟုတ်စတူဒီယိုမှာနေတဲ့ Teranex converters အဖြစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်, နှင့်သစ်ကို Teranex Express ကိုကို Quad mode ကိုဖောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ် 12G-SDI ပေါင်းစပ်ကူညီပေးပါမည် က Ultra HD 2160p60 ကဗီဒီယို devices တွေကိုတည်ဆဲသို့ HD ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လွှင့်! "
Teranex 3.1 update ကိုမှ download ပြုလုပ်ယခုရရှိနိုင် Blackmagic ဒီဇိုင်း အားလုံး Teranex 2D, 3D နှင့် Teranex Express ကိုဖောက်သည်များအတွက်တာဝန်ခံအခမဲ့ web site ကို။
audio Blackmagic ဒီဇိုင်း အသံလွှင်း အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့် Teranex Teranex 3.1 Update ကို Teranex Express ကို က Ultra HD ကိုဘောင်နှုန်းထားများ 2014-12-22
ယခင်: NewBay မီဒီယာကုန်ပစ္စည်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆုချီးမြှင့် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ StreamScope MT-50 HDT
နောက်တစ်ခု: AES67 နျ Standard ၏မွေးစားခြင်းနှင့်အတူ Riedel ယဇ်စံချိန်စံညွှန်း-Agnostic Solutions ၏ရည်မှန်းချက်နီးကပ်လာစေ့ဆျော